Momba anay - Hebei Huipin Machinery Co., Ltd.
Izahay dia orinasa lehibe mpiorina voa sy solika manokana amin'ny fikarohana siantifika, famolavolana, famokarana, varotra ary fametrahana injeniera.
HP Products & Mechine
Taorian'ny fampandrosoana nandritra ny 40 taona mahery, ny orinasa izao dia manana toby famokarana fitaovana fanosotra kilasy voalohany, injeniera teknika matihanina sy injeniera matihanina, ary koa teknolojia famokarana mandroso sy fitaovana marina. Ny fitaovana sy kojakoja fanosotra rehetra dia vokarina tsy miankina.
Ny orinasantsika feno famokarana solika famokarana solika, fanadiovana akora, pretreatment, leaching, fanadiovana, famenoana ary fanodinam-bokatra (toy ny injeniera phospholipid, injenieran'ny proteinina) novolavolain'ny orinasanay miaraka amin'ireo andrimpanjakana fikarohana sy andrimpanjakana siantifika. Ny teknolojia famokarana solika mandroso dia azo ampiharina amin'ny karazan-java-maniry menaka lehibe sy salantsalany ary kely. Ny orinasanay koa dia hiorina amin'ny fitakian'ny mpanjifa sy ny fampandrosoana ho avy ho an'ny famolavolana ny mpanjifa sy ny firafitry ny ozinina, ny fanovana zavamaniry taloha, hamahana ireo olana atrehin'ireo mpanjifa amin'ny famokarana solika.
Hanao drafitra sy teny nindramina ho an'ny mpanjifa izahay araka ny filan'izy ireo.
Ary ny injenieranay dia tompon'andraikitra amin'ny fitarihana ny fametrahana sy ny fametrahana ireo fitaovana, ary tompon'andraikitra amin'ny fampiofanana ireo mpandraharaha atrikasa mandra-pahatongany mandeha tsara.
Ny orinasanay dia manaraka ny foto-kevitry ny orinasa "laza voalohany, siansa ary teknolojia mitarika", ary namorona tsikelikely kolontsaina orinasa mifantoka amin'ny serivisy. Manaraka amina teboka avo fanombohana, fenitra avo lenta, hanomezana tolotra manokana ho an'ny mpanjifa ny mpanjifa.
Tenite "Huipin": manokana ny tenantsika amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny voamaina sy ny solika amin'ny fahaizantsika!
Hevitra "Huipin": laza aloha, teknolojia mitarika!
Tenim-panompoana "Huipin": serivisy ho an'ny mpanjifa feno sy feno!
1. 12 volana fiantohana afa-tsy ireo akanjo anaovany
2. Hodinihina miaraka amin'ny masinina ny boky torolàlana momba ny mpampiasa anglisy amin'ny antsipiriany
3. Ireo ampahany tapaka amin'ny olan'ny kalitao (ankoatry ny faritra anaovany) dia halefa maimaim-poana
4. Valio ara-potoana ny olana ara-teknikan'ny mpanjifa
5.Ny vokatra vaovao dia vaovao farany ho an'ny mpanjifa
1.Mitazona 24 ora an-tserasera hamaly ny fanontanian'ny mpanjifa sy ny hafatra an-tserasera
2.Araka ny takian'ny mpanjifa, ny mpanjifa fitarihana misafidy modely mety indrindra
3.Offer masinina voafaritra, sary ary ny vidin'ny orinasa tsara indrindra
Tongasoa ny mpanjifa hitsidika sy hifampiraharaha amin'ny orinasa!
Vokatra asongadina, Sitemap, Vokatra rehetra Masinina fanaovan-gazety solika, Mpanondraka solika, Gazety Oliva Oliva, Masinina vita amin'ny menaka mangatsiaka, Mpanondraka solika voa, Masinina fanaovan-gazety menaka kely,